Maxay ka wada hadleen Qoorqoor iyo Magatte Guisse? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxay ka wada hadleen Qoorqoor iyo Magatte Guisse?
Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) iyo Madaxa Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Qaxootiga ee UNHCR, ayaa maanta ku kulmay Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Axmed Cabdi Kaariye, Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Galmudug oo dhawaanahan ku sugnaa Muqdisho ayaa kulan la qaatay Magatte Guisse oo ah madaxa hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR.
Xoojinta wadashaqeynta iyo sidii loo dardar-gelin lahaa xafiis hay’addu ay dhawaan ku yeelan doonto caasimadda Dhuusamareeb ayaa looga hadlay kulankooda.
Qoor Qoor ayaa ku boorriyay Magatte Guisse, inuu sida ugu dhaqsiyaha badan hirgeliyo xafiiskaas, si ay ula socdaan una gacan-qabtaan qaxootiga dib ugu soo noqonaya degaannada Galmudug iyo kuwa dagaallada ku barakacay.
Mr. Magatte Guisse oo ah madaxa cusub ee hay’adda QM u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR ayaa dhawaan xilka loo soo magacaabay, waxa uuna wadaa kulamo uu la qaadanayo madaxda dowlad goboleedyada dalka.
Madaxweynaha Galmudug, ayaa Muqdisho u jooga ka qeyb galka wadahadallada ugu danbeeya ee go'aan looga gaarayo arrimaha doorashooyinka dalka.